‘काम गर्न नसक्नेहरू अब इपानमा नआए हुन्छ’ - UrjaKhabar ‘काम गर्न नसक्नेहरू अब इपानमा नआए हुन्छ’ - UrjaKhabar
काठमाडौं । दुई वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा क्रियाशील सुमन जोशी, ह्वाइट लोटस पावर कम्पनीको कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनको नेतृत्वमा लमजुङमा ६.८ मेगावाटको हिडी खोला निर्माण हुँदैछ । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव लिएर उनी जलविद्युत् व्यवसायमा संलग्न भएकी छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को कार्यसमितिमा युवालाई पनि स्थान दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएकी उनले सूर्यप्रसाद अधिकारी प्यानलबाट सचिवमा उमेद्वारी दिएकी छन् । यही सेरोफेरोमा ऊर्जा खबरले जोशीसँग गरेको कुराकानीको सार :
भोट माग्न कत्तिको व्यवस्त हुनुहुन्छ ?
इपानमा काम गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति आउनुपर्छ । म पनि यो क्षेत्रमा प्रवद्र्धकले भोगेका समस्या उठाउन सक्षम छु भन्ने विश्वासले यसपटक सूर्य अधिकारीजीको प्यानलबाट सचिवमा उमेद्वारी दिएकी छु । मेरो उमेद्वारी ऊर्जा उत्पादकहरूको संगठनको भएकाले त्यति धेरै त लागेको छैन । चुनावी प्रक्रियामा जाँदा हारजित हुन्छ । जित्ने एउटा पदमा एक जनाले मात्रै हो ।
उमेद्वारी दिने त जित्ने नै भनेर हो । नतिजा आउँदा हार पनि हुन सक्छ । त्यसकारण, चुनावी प्रक्रियामा जाँदा हार भयो भने त्यसलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ । जित्नकै लागि भनेर म पनि मेहेनत गरिरहेकी छु । चुनावमा ३० जनाको उमेद्वारी छ । यसबाट राम्रा र काम गर्न सक्ने १५ जना आउनुपर्छ । कामै नगर्ने हो भने त किन आउनुपर्यो र ?
१५ जनाको राम्रो टिम आयो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । इपानमा बसेपछि नीतिगत तहमा हुन नसकेका काम गराउन पहल गर्नुपर्छ । हिजो हामीले आफ्नो कुरा राख्न नसकेकै कारण पेनस्टक पाइपको भन्सार शुल्क बढेर आयो । हाम्रै कमजोरीका कारण यसो भएको हो । यसबारे इपान पदाधिकारीले पनि सञ्चार माध्यममा आएपछि मात्रै थाहा पाउनुभयो । हाम्रा आन्तरिक समस्या धेरै छन् । तिनलाई मिलाउँदै पनि जानुपर्छ ।
किन पहिलो चोटी नै सचिवमा उमेद्वारी दिनुभयो ?
म सचिवका लागि सक्षम छु । यहाँ रहेर काम गर्न सक्छु । कार्यक्षमता छ । यही आत्मविश्वासले नै मैले उमेद्वारी दिएकी हुँ । भोलि सबै जनाले मत दिएर मलाई जिताउनुभयो भने काम पनि गरेर देखाउँछु । महिला भएकै कारण आरक्षण कोटामा सदस्य भएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन । म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पुरुष प्रत्यासीसँग चुनाव लड्न सक्छु । आरक्षण कोटामा मात्रै महिला आउनुपर्छ भन्ने अवधारणा ठिक भएन । यही अवधारणा बदल्न पनि म सचिवमा उठेकी हुँ ।
यहाँका एजेन्डा कस्ता छन् ?
निर्वाचनमा हाम्रो प्यानलकै संयुक्त एजेन्डा छन् । त्यसैलाई मैले आफ्ना एजेन्डा बनाएकी छु । विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गरिने लबिङ, सरकारले घोषणा गरेर कार्यन्वयन हुन नसकेका सहुलियतका विषय, पोष्टेड विद्युत् खरिद दर (पिपिए) लगायत साझा एजेन्डा हुन् । म एक्लैले सबै क्षेत्र हेर्न सक्छु भन्ने छैन । हाम्रो योजना भनेको ३ जना उपाध्यक्ष छन् भने उनीहरुका लागि अलग–अलग कार्यक्षेत्र दिने हो । कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका सचिवालय हुनेछन् । यसरी काम गर्दा विद्यमान समस्या सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन सकिन्छ । एउटै व्यक्तिले सबै काम हेर्न थाल्ने हो भने नतिजा दिन सक्दैन ।
मेरो कुरा गर्ने हो भने वित्तीय व्यवस्थापनबारे ममा ज्ञान र अनुभव छ । लामो समय वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेको हुँदा स्वपुँजी तथा ऋण व्यवस्थापनबारे धेरै काम गर्न सक्छु । त्यसबाहेक नीतिगत तहबाट गराउनुपर्ने, अनुमतिपत्रको अवधि बढाउने सम्बन्धमा वन क्षेत्रको समस्या समाधान लगायत विषय पनि हाम्रा एजेन्डामा छन् । त्यसकारण, अनुभव अनुसार भूमिका दिन सकियो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
इपानमा आउनुभयो भने के–के काम गर्नुहुन्छ ?
पहिलो काम इपान सचिवालय बलियो बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने सबैलाई सम्पर्क गर्न सहज हुन्छ । समस्या लिएर आउने प्रवर्द्धकलाई सचिवालयले उचित सेवा दिन सक्छ । समस्या समाधानका उपाय खोज्न सकिन्छ । अर्को कुरा, अब त इपानलाई पनि प्रादेशिक संरचना अनुसार चलाउनुपर्छ ।
संरचनागत रूपमा काम गर्नुपूर्व सुरुका २–३ महिना हामीलाई अध्ययन गर्न समय लाग्छ । भोलि इपानको सदस्यता लिनेको संख्या पनि बढ्ला । त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संख्या बढाएपछि हाम्रो आवाज सबैले सुन्छन् । नियमित बैठक समेत अपरिहार्य छ । अहिलेसम्म सदस्यता लिने कम्पनीलाई इपानमा कहिले के विषयमा छलफल भयो ? के हुँदैछ ? केही थाहा हुँदैन । यो परिपाटीको अन्त्य गर्न नियमित बैठक गर्ने परम्पराको थालनी हुनेछ । क्षमता अनुसार सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । काम नगर्ने हो भने इपानमा नबसे हुन्छ ।
इपान निर्वाचन निकै विवादित बन्यो । यसबारेमा अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । किन यसो भइरहेको छ ?
नयाँ कार्यसमिति समयमा चयन नहुँदाको असर जेठ १५ गते आएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै पर्यो । हामीले मुद्दा उठाउन नसकेकै कारण हाम्रा मागहरु ओझेलमा परे । त्यसैको नतिजा पेनस्टक पाइपको भन्सार शुल्क बढेर आयो । यो कुरा त सबैमा जगजाहेर नै छ । इपानको जिम्मेवारीमा रहनुभएका पदाधिकारीको भूमिका कमजोर भएर नै हाम्रा मुद्दा ओझेलमा परे । उहाँहरूले गर्नुपर्ने थियो । हाम्रो त अहिलेसम्म साधारणसदस्य बाहेक इपानमा केही पहुँच छैन । न सदस्यसँग छलफल भयो । यससम्बन्धी कागजात पनि छैन । यी कुरा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अब निर्वाचनलाई धेरै तन्काउनु हुँदैन । निर्वाचन नै निस्पक्ष प्रक्रिया हो नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न । जो विजयी भएर आउनुहुन्छ, भोलि उहाँहरुले नै काम गर्नुपर्छ । निर्वाचित भइसकेपछि यो वा त्यो प्यानल भन्ने हुँदैन । मिलेर काम गर्ने हो ।
सहमतिमा पदाधिकारी चयनको सम्भावना अझै देख्नुहुन्छ वा निर्वाचन निर्विकल्प हो ?
केही दिनअघिसम्म सहमतिमा जान हाम्रो प्यानलबाट पहल भएको थियो । केही अग्रजहरू गएर अर्को प्यानलका साथीहरू समक्ष कुरा राख्नु भएको थियो । तर, त्यति सकारात्मक नतिजा आएन । मिलेर जानेभन्दा अलि उपेक्षा गरेजस्तो लागेकाले अब निर्वाचन प्रक्रियाबाटै जानुपर्छ भन्ने छ ।
अबको इपान कस्तो हुनुपर्छ ?
अबको इपानको कार्यसमिति सक्रिय हुनुपर्छ । जति सक्रियता देखाउन सक्यो त्यति नै काम गर्न सकिन्छ । पहिला धेरै एजेन्डा नआएर तथा इपानले कस्ता–कस्ता समस्या समाधान गर्छ भन्ने ज्ञान नहुँदा काम नभएको हुनसक्छ । अहिले सदस्यहरूको संख्या बढेको छ । इपानमा जोडिनेहरूको संख्या थपिएकाले भोलिका दिनमा भूमिका अझै फराकिलो भएर जानेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।